Ganacsade Turki ah oo Muqdisho ku sugan oo sawir ka bixiyay nolosha Soomaalida | Somalidiasporanews.com
Ganacsade Turki ah oo Muqdisho ku sugan oo sawir ka bixiyay nolosha Soomaalida
August 10, 2012 | Filed under: Wararkii ugu Dambeeyay | Posted by: Webmaster Muqdisho Aug 10,2012(SDN)-Ganacsade u dhashay dalka Turkiga oo ka soo jeeda qowmiyada Kurdhishka loo yaqaan ayaa bar Internetka ah oo la yidhaahdo Rudow.net waxa uu uga waramay xaalad nololeedka Soomaliya.
Abdullah Aydin oo Soomaalidu u taqaano Kurdiga waalan ayaa shegay in Soomaaliya ay tahay meel maalgashiga ku haboon,balse xaalada siyaasadeed iyo ta nololeedba ay yihiin qaar liita.
Aydin ayaa sheegay in cimilada dalka iyo kheyraadkuba yihiin qaar ku haboon in la maal gashado balse ay jiraan dalal shisheeye oo aan sidaa ogoleyn.
Aydin mar uu ka hadlayay nolosha Soomaalida ayaa waxa uu sheegay in xaaladoodu tahay mid cakiran oo waxa jira buu yiri gaajo faro badan.
“Dadaku kolka ay ku eegayaan waxa ay arkaan uu dollar,dumarka mid walba waxaa looga tegay dhawr caruura oo ay keligood koriyaan,ragoodii dagaalada kuma ay dhimane Dumar kale ayay iska guursadeen”ayuu yiri Abdullah Aydin.
“Dumarku waa ay shaqeeyaan balse raga dalkani meelaha ayuubay iska meereystaan”ayuu mar kale ku celiyay ninkan maal qabeenka ah.
Mar uu ka hadlayay xaalada nabadeed ee dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in berigii hore beelo dagaalamayeen,haatanse kooxo loo dagaalamo.
Xaalada guud ee dalka ayuu ka deyriyay”Waa dal la burburiyay gebigiisaba,mana muuqato in xaaladuhu ka soo reynayaan”ayuu yiri.
Soomaalida ayuu sheegay in ay yihiin dad aan ka warheyn kheyraadka ay heystaa tusaale waxa uu u soo qaatay xoolaha nool.
“Xooluhu waxa ay iska marayaan wadooyinka,Soomaaliduna shaaha caano ay ku cadeystaan ayay dukaamada ka iibsadaan. Turkidu waxa ay caanaha xoolaha ka sameeyaan badeecooyin tiro badan,sida subaga adag (butter) iyo qaar kale”ayuu yiri maalqabeenka Turkiga ahi.
Mar wax laga weydiiyay doorashooyinka soo socda iyo cida ku guuleysan doonata waxa uu sheegay in aan la saadaalin karin cida guuleysan doonta August dhamaadkeeda.
Maal qabeen Abdullah Aydin ayaa waxa uu ka waramay gacan qabadka dalkiisa Turkigu ay u fidiyeen Soomaaliya.
“Markii hore Turkigu gacan ay Soomaalidu ku diirsatay ayay fidiyeen,oo waxa ay dhisee cusbitaalo,dugsiyo iyo ceelal biyaha laga cabo,balse haatan waxaad moodaa in Soomaalidu ay ka walaacsan yihiin deeqaha waxbarasho ee caruurtooda Turkiga lagu geeyo” ayuu yiri Aydin.
“Soomaalidu waxa ay igu yiraahdaan Caruurteenu waxa ay soo noqdaan iyaga oomuuqaalkoodu sidii hore uu yahay oo maxkaxdana laga soo rogay” ayuu raaciyay Ganacsadahani.
Ganacsade Abdullah Aydin ayaa farta si khaasa ugu fiiqay Fethullah Gulen oo ah ruuxa asaasay dhaqdhaqaaqa Islamiga ah ee Gulen oo Ardeyda Soomaalidu waxbarashada u tagto.
Si kastaba ha ahaatee ganacsadahan oo iminka xiiseynaya dhoofinta xoolaha Soomaalida ayaa ah ruuxii u horeeyay ee shisheeye ah oo mudo dheer si qoto dheer uga warbixiya dalka iyo dadka Soomaalida ah.